ဆေးခန်းန်ဆောင်မှုများ – Dawn ဆေးခန်း
အင်္ဂါနေ့ည – ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ & သွားဘက်ဆိုင်ရာ (ကသာလူကြီးများ)
ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ဆေးခန်းအင်္ဂါနေ့ညတွင်ကျင်းပခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့အနေဖြင့်ထိုနေ့တွင်ပင်လာရောက်လည်ပတ်သူပူဇော် 6:00 သို့ 8:00 ညနေ. သငျသညျရက်ချိန်းရှိသည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်, ကျွန်တော်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးလာပေါ်တွင်သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်, ပထမဦးဆုံးအခြေခံအစေခံ. Dawn တစ်ခု interprofessionally အခမဲ့ဆေးခန်းဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဆေးဝါးကျောင်းသားများကိုဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်, ဆရာဝန်တွေ, ဆေးဝါး, သွားဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသ, သူနာပြုများ, လူမှုရေးလုပ်သားများ, နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပညာရှင်များ.
အရေပြား – အသားအရေ
မျက်လုံးပညာရပ်ဆိုင်ရာ – မျက်စိ
အဆုတ်ပညာ – အဆုတ်
အာရုံကြော – ဦးနှောက်
ဒူထာဗေဒ – အဆစ်, ကြွက်သား, ခညျြနှောငျရနျကွိုး
စိတ္ပညာ – စိတ်ကျန်းမာရေး
Optometry – မျက်စိ
ကျနော်တို့ကင်ဆာပြပေးမ (mammograms နှင့် colonoscopy အပါအဝင်) pap smear မှလွဲ..
သောကြာနေ့နေ့လည်ခင်းဆေးခန်း – ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး (ရက်ချိန်း Only2pm-5pm အားဖွငျ့ဖွစျသညျ)
အဆိုပါ Dawn ဆေးခန်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်းအပေါ်တိုးချဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်း. ငါတို့အသစ်ဒဏ်ရာအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ဆက်ဆံဖို့တစျနာရီချိန်းနှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှုပြဿနာများကိုအဘို့အလူနာမြင်, ကြီးကြပ်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များကိုပေး, နှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့် function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်.
အားကစား၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုအပါအဝင်ဒဏ်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု, အလုပ်, ကိုယ်ခန္ဓာကိုတလျှောက်လုံးအိမ်မှာသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်မတော်တဆထိခိုက်မှုဒဏ်ရာ.
ထိုကဲ့သို့သောအနိမ့်ပြန်နာကျင်မှုကိုအဖြစ် acute သို့မဟုတ်နာတာရှည်နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု, လည်ပင်းနာကျင်မှု, အဆစ်၌ဖြစ်စေနာတာရှည်နာကျင်မှုနဲ့ခိုင်မာသော.
အာရုံခံ, ဟန်ချက်သို့မဟုတ်ညှိနှိုင်းကိစ္စများနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်နှင့်ကုသမှုချိန်ခွင်လျှာလဲ, ရေတံခွန်သို့မဟုတ်ကျသွား၏ကွောကျရှံ့ခွငျး၏သမိုင်းကြောင်း, သို့မဟုတ်အလွင်ပင်အရသာသို့မဟုတ်ကြွက်သားအားနည်းခြင်းပြဿနာများ.
ထိုကဲ့သို့သောလမ်းလျှောက်အဖြစ်နေထိုင်သောနေ့စဉ်မြားရှိခြင်းအခက်အခဲပြီးပြည့်စုံတာဝန်များကိုများအတွက်ကုသမှု, အလုပ်, နှင့်အိမ်သူအိမ်သားအိမ်မှုဝေယျာ function ကိုတိုးတက်စေရန်.
ထိုကဲ့သို့သောမူးဝြေခင်းအဖြစ်လက္ခဏာတွေ၏အကဲဖြတ်နှင့်ကုသမှု, ချည်ငင်, vertigo, အနားယူမှာရွေ့လျားမှု၏သဘော.
အဆိုပါ Dawn ဆေးခန်းအဘယ်သူ၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဓာတ်ခွဲခန်းသို့မဟုတ်ပုံရိပ်ရလဒ်များကိုအားဖြင့်တိုးမြှင့်လိမ့်မည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောလူနာများအားအခမဲ့စမ်းသပ်နှင့်ဆေးဝါးပုံရိပ်န်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်. ဓါတ်ခွဲခန်းနမူနာဆေးခန်းမှာလေ့ကျင့်ကျောင်းသားများကစုဆောင်းကောက်ယူနှင့်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံလက်တွေ့ဓာတ်ခွဲခန်းများကလုပ်ငန်းများ၌နေကြတယ်. ရလဒ်များတက်နောက်သို့လိုက်ချိန်းအဘို့အဆက်သွယ်မေးမြန်းရာဆေးခန်းနှင့်လူနာပြန် faxed နေကြတယ်.
အဆိုပါ Dawn ဆေးခန်းကိုချက်ချင်းရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်သေချာစမ်းသပ်ပစ္စည်းကရိယာရှိတယ်, ဆေးခန်းစေတနာ့ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်သင်ကြားအရေးကြီးသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်ကိုကူညီအသုံးပွုနိုငျသော. ဤဥပမာပါဝင်:
လက်စထရောအဘို့အအထောက်အကူပြုအဆီဓါတ် panel ကိုစမ်းသပ်
က Strep လည်ချောင်းနှင့်တုပ်ကွေးစမ်းသပ်မှုတွေ
နောက်ဆုံး, နံနက်ဆေးခန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်လိုအပ်နေလူနာတွေအတွက်ဒေသခံရေဒီယိုရောင်ခြည်အထူးကုတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်. ကျောင်းသားစေတနာ့ဝန်ထမ်းကဤစမ်းသပ်မှုများထဲကတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်သူတစ်ဦးလူနာသကဲ့သို့သင်တို့ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်လိုလျှင်, ကျနော်တို့စမ်းသပ်ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ရလဒ်များကိုပြန်လည်သင့်အားဆက်သွယ်ရှိသည်ဖို့သင်တို့နှင့်အတူအလမ်းကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်.